” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ - Barnyar Barnyar
ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့….
တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။
ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” ဟုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
ထိုသူကလည်း “ဟဲလို” ဟု ပြန်နူတ်ဆက်လေသည်။ ဆက်၍ ထိုလူကြီးက ကျွန်တော့ကို ပြုံးကာကြည့်လိုက်ပြီး “မောင်ရင် ဘာများလုပ်သလဲကွယ်” ဟု.မေးသည်။
သေချာသွားသည်မှာ ထိုသူသည် နာမည်ကျော်ဘောလိဝုဒ်အမီတာဘချမ်း၏ ရုပ်ရှင်ကားများကို မကြည့်ဘူးပုံပေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က ပြုံးလိုက်ပြီး “ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. ဦး ကရော…ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါသလား”
“အင်း ကြည့်တော့ကြည့်တယ် … အများကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး … နှစ်တော်တော်ကြာမှ တစ်ကားလောက် ဆိုပါတော့” ပို၍သေချာသည်မှာ သူသည် အမီတာဘချမ်း၏ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို မကြည့်မိသေးကြောင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့ စိတ်ထဲမှာလည်း ကျွန်တော့်လို ဘောလိဝုဒ်နာမည်ကျော် မင်းသားတစ်ယောက်ကို မသိရကောင်းလားဆိုကာ စိတ်ခုသွားမိပါသည်။
ထိုလူကြီးက ဆက်မေးပြန်တယ် “မောင်ရင်က ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာဆိုတော့ဘာတွေ လုပ်သလဲ”
“အိုး … မင်းသားလား ကောင်းတာပေါ့” ထိုလူကြီးက ဤမျှသာ ပြန်ပြောသဖြင့် ကျွန်တော့စိတ်ထဲ ထပ်မံ၍ ဘဝင်မ ကျ ဖြစ်သွားမိပြန်သည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်ကဆင်းသက်ရန်အချက်ပေးနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ထွက်ခွာရတော့မည်။ ကျွန်တော် က ထိုလူကြီးကို လက်ထိုးပေးရင်း…
“ကျွန်တော် အမီတာ ဘချမ်းပါ”
ထိုလူကြီးကလည်း ပြုံးပြလိုက်ပြီး… “ဟုတ်လား … ဝမ်းသာပါတယ်ကွယ် … ဦးနာမည်လည်း မှတ်ထားပါ
ဂျေ အာ ဒီ တာတာ” ပါ…
ထိုလူကြီး၏ စကားအဆုံးမှာ ကျွန်တော် အလွန်အမင်း ရှက်ရွံ့သွားမိပါသည်။ အမှန်တော့ *ဂျေအာဒီ တာတာ* ဆိုသည့်ထိုလူသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာသော.. TATA ကုမဏီ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။
ဘောလီဝုဒ် မင်းသားအမီတာဘချမ်းက ပြန်ပြောပြသည်မှာ “ကျွန်တော် အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ အများကြီးသင်ခန်းစာရသွားတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်လို့ ထင်ပြီး သွေးနားထင်ရောက်နေခဲ့တာ။
သာမာန်လူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို မသိဘူးဆိုတာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်မိတာပေါ့။ တစ်ကယ်တမ်းတော့… ထိုသူ ကျွန်တော့်ကို မသိတာ ဘာမှမဟုတ်ပါလား … သူ့ကို ကျွန်တော် မသိတာမှ တော်တော် နောင်တရသွားမိတယ်။
အလွန်ရိုးသားနှိမ့်ချစွာနဲ့ … သူ့ကိုယ်သူ ဘာမှန်းမသိအောင် နေပြသွားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်က မထင်မှတ်ပဲ ပေးသွားတဲ့.သင်ခန်းစာက ..
#ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ”ဗျာ
(Amithabh Bachan’s Traveling with Gentleman)
credit to တင်ညွန့်
” ရိုးဂုဏျဆိုတာ တနျဖိုးဖွတျလို့ မရဘူး “
ငါ့လောကျခွထေောကျ မြားတဲ့သူကမ်ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကြောကျတုံးပျေါက ကငျးခွမြေားက ကွှေးကွျောတော့ သူနတေဲ့နရောနဲ့အနီးနားက ကြောကျကုနျးပျေါက ပို့နတျသံကောငျက မငျးကငါ့ကို ပွိုငျဝံ့လို့လားပွောလိုကျတော့ ခငျဗြားကိုတော့ကြှနျနျော မပွိုငျဝံ့ပါလို့ကငျးခွမြေားက ပွောရှာပါသတဲ့….
တဈနတှေ့ငျ အမိတာဘခမျြးသညျ လယောဉျဖွငျ့ခရီးထှကျရနျ ကိစ်စတဈခုပျေါလာသညျ။ လယောဉျပျေါရှိ သူနှငျ့ဘေးခငျြးကပျလကျြကသြော လူတဈယောကျမှာ သူ့ထကျအသကျကွီးပွီး ရိုးရိုးရှပျအင်ျကြီနှငျ့ ဘောငျးဘီကိုသာ ဝတျထားသော သာမနျ လူလတျတနျးစားပုံစံပေါကျနသေညျ့ လူကွီးတဈယောကျဖွဈသညျ။
ထိုလူကွီးမှာ ပညာတော့ တတျပုံရသညျ။ သတငျးစာတဈစောငျကို ဖတျနတောတှရေ့သညျ။ ထိုစဉျ လယောဉျမယျလေးက လကျဖကျရညျဖွငျ့ လိုကျဧညျ့ခံလသေညျ။
ထိုလူကွီးက လကျဖကျရညျခှကျကိုယူလိုကျပွီး သူနှငျ့ဘေးခငျြးကပျ အမိတာဘခမျြးကို အသာအယာပွုံးပွလာလသေညျ။bအမိတာဘခမျြးကလညျး ထိုလူ့ကို အခှငျ့သာခိုကျ ပွုံးပွလိုကျပွီး “ဟဲလို” ဟုနှုတျဆကျလိုကျသညျ။
ထိုသူကလညျး “ဟဲလို” ဟု ပွနျနူတျဆကျလသေညျ။ ဆကျ၍ ထိုလူကွီးက ကြှနျတော့ကို ပွုံးကာကွညျ့လိုကျပွီး “မောငျရငျ ဘာမြားလုပျသလဲကှယျ” ဟု.မေးသညျ။
သခြောသှားသညျမှာ ထိုသူသညျ နာမညျကြျောဘောလိဝုဒျအမီတာဘခမျြး၏ ရုပျရှငျကားမြားကို မကွညျ့ဘူးပုံပျေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျတျောက ပွုံးလိုကျပွီး “ရုပျရှငျလုပျငနျး လုပျပါတယျခငျဗြာ .. ဦး ကရော…ရုပျရှငျကွညျ့ပါသလား”
“အငျး ကွညျ့တော့ကွညျ့တယျ … အမြားကွီးတော့ မဟုတျဘူး … နှဈတျောတျောကွာမှ တဈကားလောကျ ဆိုပါတော့” ပို၍သခြောသညျမှာ သူသညျ အမီတာဘခမျြး၏ ရုပျရှငျကားတှကေို မကွညျ့မိသေးကွောငျဖွဈသညျ။
ကြှနျတော့ စိတျထဲမှာလညျး ကြှနျတေျာ့လို ဘောလိဝုဒျနာမညျကြျော မငျးသားတဈယောကျကို မသိရကောငျးလားဆိုကာ စိတျခုသှားမိပါသညျ။
ထိုလူကွီးက ဆကျမေးပွနျတယျ “မောငျရငျက ရုပျရှငျလုပျငနျးမှာဆိုတော့ဘာတှေ လုပျသလဲ”
“အိုး … မငျးသားလား ကောငျးတာပေါ့” ထိုလူကွီးက ဤမြှသာ ပွနျပွောသဖွငျ့ ကြှနျတော့စိတျထဲ ထပျမံ၍ ဘဝငျမ ကြ ဖွဈသှားမိပွနျသညျ။ ထိုစဉျ လယောဉျကဆငျးသကျရနျအခကျြပေးနပွေီ။ ကြှနျတျောတို့ ထှကျခှာရတော့မညျ။ ကြှနျတျော က ထိုလူကွီးကို လကျထိုးပေးရငျး…
“ကြှနျတျော အမီတာ ဘခမျြးပါ”
ထိုလူကွီးကလညျး ပွုံးပွလိုကျပွီး… “ဟုတျလား … ဝမျးသာပါတယျကှယျ … ဦးနာမညျလညျး မှတျထားပါ
ဂြေ အာ ဒီ တာတာ” ပါ…
ထိုလူကွီး၏ စကားအဆုံးမှာ ကြှနျတျော အလှနျအမငျး ရှကျရှံ့သှားမိပါသညျ။ အမှနျတော့ *ဂအြောဒီ တာတာ* ဆိုသညျ့ထိုလူသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ သနျးပေါငျးမြားစှာ ခမျြးသာသော.. TATA ကုမဏီ လုပျငနျးပိုငျရှငျ သူဌေးကွီးတဈယောကျဖွဈလသေညျ။
ဘောလီဝုဒျ မငျးသားအမီတာဘခမျြးက ပွနျပွောပွသညျမှာ “ကြှနျတျော အဲဒီနကေ့စပွီးတော့ အမြားကွီးသငျခနျးစာရသှားတယျ။ ကြှနျတျောက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလှနျကွီးမွတျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီးတဈယောကျလို့ ထငျပွီး သှေးနားထငျရောကျနခေဲ့တာ။
သာမာနျလူတဈဦးက ကြှနျတေျာ့ကို မသိဘူးဆိုတာ စိတျထဲတဈမြိုးဖွဈမိတာပေါ့။ တဈကယျတမျးတော့… ထိုသူ ကြှနျတေျာ့ကို မသိတာ ဘာမှမဟုတျပါလား … သူ့ကို ကြှနျတျော မသိတာမှ တျောတျော နောငျတရသှားမိတယျ။
အလှနျရိုးသားနှိမျ့ခစြှာနဲ့ … သူ့ကိုယျသူ ဘာမှနျးမသိအောငျ နပွေသှားတဲ့ လုပျငနျးရှငျ သူဌေးကွီးတဈယောကျက မထငျမှတျပဲ ပေးသှားတဲ့.သငျခနျးစာက ..
#ရိုးဂုဏျဆိုတာ တနျဖိုးဖွတျလို့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ”ဗြာ
credit to တငျညှနျ့